Linn Htin, Author at Barnyar Barnyar
Articles by Linn Htin
အိမ်မွေးဝက်ဝံ ၂ကောင် စိတ်ရိုင်းဝင်ပြီး ရန်ပြုသဖြင့် သခင်ဖြစ်သူ သေဆုံး
April 7, 2022 Linn Htin 0
အိမ်မွေးဝက်ဝံ ၂ကောင် စိတ်ရိုင်းဝင်ပြီး ရန်ပြုသဖြင့် သခင်ဖြစ်သူ သေဆုံး တောင်ငူ၊ ဧပြီ၇၊ ၂၀၂၂။ ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမြို့မှာ တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူတဦး မွေးထားတဲ့ ဝက်ဝံ ၂ကောင် စိတ်ရိုင်းဝင်ပြီး သခင်ဖြစ်သူကို ကိုက်သတ်ခဲ့လို့ ကိုအောင် ခေါ် မြင့်မိုရ်နန်း ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မနက် […]
အလကားရညျ မခနြဲ့တော့ အလကားလူ မဟုတျဘူး ပိုကျဆံရှငျးပွီတဲ့
အလကားရညျ မခနြဲ့တော့ အလကားလူ မဟုတျဘူး ပိုကျဆံရှငျးပွီတဲ့ “ဂြျောနီ” “ဘာလဲ” “ဟိုဖကျလမျးမှာ လကျဖကျရညျဆိုငျ အသဈဖှငျ့တယျတဲ့ စာပှဲထိုးတှေ စကားပွောတာ မိုကျမှမိုကျပဲ” “ဟုတျလား သှားစားကွညျ့အုံးမှပဲ” ဆိုငျဖှငျ့ပွီးတာနဲ့ အသဈဖှငျ့တဲ့ ဆိုငျကို လဈထှကျခဲ့တာပေါ့ ဆိုငျထဲဝငျဝငျခငျြး……. “!!!!နှပျရညျကရြငျ ပွောဟေ့!!! သောကျဖို့ စောငျ့နကွေပွီ!!!” ဖှီး! […]
ကြွက်ထောင်ချောက် (ကိုယ့်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ နေလို့မရပါ)
April 6, 2022 Linn Htin 0
ကြွက်ထောင်ချောက် (ကိုယ့်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ နေလို့မရပါ) (ဖေမြင့်)᠌᠌᠌ ᠌᠌ တစ်ခါတုန်းက ကြွက်တစ်ကောင်က လယ်သမားအိမ်ထဲ အိမ်နံရံပျဉ်နှစ်ချပ် စပ်ကြားက ဟ,နေတဲ့နေရာ အကြားကနေ ချောင်းကြည့်တော့ လယ်သမားနဲ့ သူ့မယား အထုပ်တစ်ထုပ် ဖြေနေတာတွေ့ရတယ်။ အထဲမှာ စားစရာများ ပါလေမလား၊ ပါရင် ငါများ တနည်းနည်းနဲ့ စားရလေမလား၊ မျှော်လင့်တဲ့ […]
သင်ျကွနျ နှငျ့ နှဈဆနျးတဈရကျနေ့ ဖွဈပျေါလာပုံ သမိုငျး
သင်ျကွနျ နှငျ့ နှဈဆနျးတဈရကျနေ့ ဖွဈပျေါလာပုံ သမိုငျး သင်ျကွနျသညျ သင်ျကန်တဟူသော ပါဠိပုဒျမှ လာသညျ့ သက်ကတရရဈသံနှငျ့ သင်ျကွနျဟူသော မွနျမာစကား ဖွဈပျေါလာခွငျးဖွဈသညျ။ သင်ျကန်တ၏အနကျမှာ ကူးပွောငျးခွငျး၊ တဈနရောမှ တဈနရောသို့ ရောကျရှိခွငျးဟူ၍ဖွဈသညျ။ မွနျမာလူမြိုးတို့၏ ကငျြးပမွဲဖွဈသော ၁၂ ရာသီ ပှဲတျောမြားတှငျ သင်ျကွနျရသေဘငျပှဲတျောသညျ အလှနျကွီးကယျြစညျကားသော […]
April 4, 2022 Linn Htin 0
မျက်နှာပေါ်က တင်းတိပ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် သဘာဝဆေးနည်း မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်ဖြစ်၍ စိတ်မညစ်ရအောင် သဘာဝနည်းနဲ့ ကုမယ်… အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်ဖြစ်၍ စိတ်ညစ်နေလျှင် အောက်ပါ သဘာ ဝဆေးနည်းများဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကုသနိုင်ကြပါတယ်။ (၁) ဒန္တသုခဆေးပင် အရွက်စိမ်းကို ကြိတ်၍ သနပ်ခါးနှင့်ရောစပ်ကာ ညအိမ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း တင်းတိပ်ပေါ်ကို လိမ်းပေးပါ။ […]
Total Hits : 318666